Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka LATAM dia mamaly ny fanontaniana: Inona no atao hoe tena zava-misy?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka LATAM dia mamaly ny fanontaniana: Inona no atao hoe tena zava-misy?
Septambra 24, 2018
LATAM, vondrona kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany any Amerika nametraka fitaovana nomerika finday ahafahan'ny mpandeha manara-maso ny valizy am-pelatanana mialoha.
Ny LATAM no vondrona fiaramanidina voalohany any Amerika izay nanatanteraka fitaovana dizitaly finday ahafahan'ny mpandeha manara-maso ny valizy am-pelatanana mialoha. Io irery no vondrona fiaramanidina manolotra azy amin'ny fitaovana Android sy IOS, izay manatsara ny fidirana amin'ny serivisy vaovao.
Ny fitaovana dia loharanom-pahalalana ary ny valizin'ny tànan'ireo mpandeha dia mbola azo ovaina mandritra ny fizotry ny fiakarana ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny refin'ny haben'ny kabine.
"Ny mpandeha no ivon'ny asa aman-draharahantsika ary tsy mitsahatra mitady fomba hanatsarana ny fivezivezeny izahay miaraka amin'ny vahaolana ara-teknolojia sy manokana manokana manerana ireo fantsona nomerika," hoy i Dirk John, filoha lefitra Digital, LATAM Airlines Group. “Ity endri-javatra vaovao ity dia ampahany amin'ny fanoloran-tenantsika hanome safidy bebe kokoa amin'ny fanandramana, izay manome fifehezana bebe kokoa ny mpandeha amin'ny diany. Ny fitaovana fampitomboana ny tena zava-misy dia hanome torolàlana mahasoa an'ireo mpandeha hanamarina mialoha raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sambo ny entany. ”
Ny fitaovana vaovao dia misy amin'ny ampahany amin'ny fampiharana LATAM, izay manana mpampiasa maherin'ny 3 tapitrisa manerantany ary nahita ny isan'ny mpanjifa mitombo 10% eo ho eo isam-bolana hatramin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2018.
Ny serivisy dia ohatra iray fotsiny amin'ny fomba itadiavan'ny LATAM hanamafisana ny toerany amin'ny maha-orinasa vaovao amin'ny faran'ny fanapahana nomerika. Ny fandraisana andraikitra vao haingana dia misy ny fampidirana kioska manompo tena ao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe LATAM sy ny fananganana laboratoara nomerika hanavao sy hamoronana vahaolana vaovao ho an'ny mpandeha.
Ahoana ny fomba fiasan'ilay fitaovana?
Ny fitaovana dia azo idirana amin'ny alàlan'ny menio 'more' an'ny fampiharana finday LATAM, ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny safidy 'augmented reality'. Omena torolàlana avy eo handrefesana ny valizy entin'ny tanana amin'ny boaty virtoaly.
Fitaovana inona no ilaina mba hidirana amin'ilay fitaovana?
Azo ampiasaina amin'ny fitaovana finday (finday sy takelaka) misy fitaovana Android (7.0 na avo kokoa) ary IOS (11.0 na avo kokoa) ny fitaovana. Ny apetraka farany an'ny fampiharana finday LATAM dia tsy maintsy apetraka.
Andro fisotroana kafe eran-tany: andro fisakaizana eran'izao tontolo izao?
IFEMA manatsara ny rafitra fiarovana avo lenta amin'ny toeram-pivoriana
Vaovao momba ny fahasalamana
Vaksinin'ny COVID-19: Manankarena aloha, fitsiriritana orinasa, mamindrà fo amintsika rehetra
Ny COVID-19 any India dia nihoatra ny 21 tapitrisa tamin'ny tranga vaovao 412,262 XNUMX androany
14 ora lasa izay
22 ora lasa izay
Faritany malaza any Thailandy amin'ny alàlan'ny fampandrenesana COVID-19 Deep Red
Fahasalamana tsy misy fetra navoakan'ny World Tourism Network
Rivo-doza mahery setra no namono olona 11, naratra an-jatony tany Sina
Ny fampirantiana ny fizahan-tany any Pearl of Africa dia mandeha virtoaly eto amin'ity faritra ity
Ny Airlines ho an'i Amerika dia manambara ireo mpandray ny loka 2021 Nuts sy Bolts
Vaovao momba ny dia an'i Saint Kitts sy Nevis
St. Kitts & Nevis dia manavao ny fepetra takiana amin'ny mpandeha ho an'ny mpandeha rivotra iraisam-pirenena vita vaksiny
7 andro lasa izay